करीब एक वर्षको अन्तरालपछि राजधानीमा नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिवहरूको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठक शुरु भएको छ । बैठकमा ११ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले तथा त्यति नै सदस्य रहेको भारतीय प्रमण्डलको नेतृत्व विदेश सचिव हर्षबर्धन श्रृङ्गलाले गर्नुभएको छ ।...
प्रचण्डमाथि पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप
काठमाडौं, मंसिर ११ । सत्तारूढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि पार्टी सचिवालयमा छलफलका क्रममा रहेका दस्तावेज आफूखुसी किताबका रूपमा निकालेर वितरण गरी कार्यकर्तामा विभाजित मानसिकता सिर्जना गर्दै पार्टीलाई फुटको दिशामा अग्रसर गराउन खोजेको आरोप लागेको छ । अध्यक्ष...
काठमाडौं, ११ मंसिर । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदत्याग गर्न र प्रायश्चित गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता छ भने आफ्नै...
काठमाडौं, १० मंसिर । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद झनै चर्किने भएको छ । यही मंसिर १३ गते सचिवालय बैठक बस्दैछ । कार्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेपछि विवाद...
« 123 … 1,190 »